यूएईमा अवकाशपछि पनि विदेशी श्रमिक बस्न पाउने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यूएईमा अवकाशपछि पनि विदेशी श्रमिक बस्न पाउने !
यूएईले अवकाश प्राप्त विदेशी श्रमिकका लागि ‘रिटार्यडमेन्ट भिसा स्किम’ ल्याएको छ ।
यूएईमा कामबाट अवकाश पाएपछि पनि यूएईमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले यो भिसा पाउने नियम यूएईको मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार पास गरेको हो ।
यो स्किम अन्तर्गत अवकाशपछि पनि विदेशी नागरिकले चाहेमा यूएईमै रहन सक्छन् । तर रिटार्यडमेन्ट भिसा लिनका लागि यूएई सरकारले तोकेका मापदण्ड भने पूरा गर्नपर्छ ।